ပါရမီလမ်း ပါရမီစိန်ဂေဟာအနီး မြေအိုးလေးဟော့ပေါ့
#Groupbuyy Discount Coupon#up to 15% Discount #မြေအိုးလေးပါရမီ
✔️ ✔️ ✔️Groupbuyy အစားတစ်လိုင်းတို့အတွက် ကိုယ်တွေသွားခဲ့တဲ့ ဟော့ပေါ့ဆိုင်ကောင်းကောင်းတစ်ဆိုင်အကြောင်း ဖောက်သည်ချဗြဇေ 😜 😜.. 👉ပါရမီစိန်ဂေဟာဘက်ကို Shopping ထွက်ရင်း ဈေးနှုန်းလည်းတန်ပြီး ဟော့ပေါ့ Buffet အပြင် အစားအစာတော်တော်စုံစုံလင်လင်ကို တစ်ဝဆွဲလို့ရမည့် 👉 ပါရမီလမ်း ပါရမီစိန်ဂေဟာမျက်စောင်းထိုးမှာရှိတဲ့ 🏠 🏠 မြေအိုးလေးဟော့ပေါ့ဆိုင်လေးကို ဝင်ရောက်မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ အကြံပေးချင်တယ်။
💫 💫10% & 15% Discount ထုတ်ယူနည်းလေးကို အောက်မှာထည့်ပေးထားတယ်နော်။
✔️ ✔️ ✔️မြေအိုးလေးဟော့ပေါ့ဆိုင်မှာက ဟော့ပေါ့ကိုတစ်ယောက်စာ 👉 1 Set ကို 💰၇၀၀၀ကျပ်ပါ တစ်ယောက်စာဆိုပေမဲ့ နှစ်ယောက်တော့ကောင်းကောင်းဆွဲလို့ရတယ် 👉 ဒီSet ထဲမှာဘာတွေပါမလဲပေါ့ -- 💫 💫မိမိကြိုက်နှစ်သစ်ရာ အသားနှစ်ပွဲ ၊ ကြာဇံတစ်ပွဲ ၊ အရွက်အစုံတစ်ပွဲ ၊ ကြက်ဥတစ်လုံး ပါတယ်။ဟော့ပေ့ါရဲ့ အဓ်ိက သော့ချက်က 👉 ဟင်းရည်ပါ မြေအိုးလေးဟော့ပေါ့ဆိုင်ရဲ့ ဟော့ပေါ့ဟင်းရည်က သုံးမျိုးရှိတယ်။တုံယမ်း ၊မာလာ ၊ စွန်တန် စသဖြင့်ပေါ့ ကိုယ်တွေအဖွဲ့ကတော့ တုန်ယမ်းနဲ့မာလာ ဆွဲခဲ့တယ် တော်တော်ကို မိုက်တာ ဘာမှအပိုအလိုမ၇ှိဘူး သူ့တို့စပ်ပေးထားတဲ့ ဟင်းရည်ရဲ့အရသာနဲ့တင် Good နေပြီ စွန်တန်ကတော့ အချည်စူးစုးအရသာ Crazy တွေအတွက် ရှယ်ပေါ့။နောက်ထပ်အသားအပိုတစ်ပွဲထပ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ 💰 အသားတစ်ပွဲကို -၁၈၀၀ကျပ် ၊ 💰 ပင်လယ်စာတစ်ပွဲကို -၁၈၀၀ကျပ် ၊ 💰အရွက်စုံတစ်ပွဲ -၁၂၀၀ကျပ် ဈေးနှုန်းကလည်း မဆိုးဘူး တစ်ပွဲဆိုလည်း အများကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးထူးခြားတာလေးက မြေအိုးလေးဆိုတဲ့အတိုင်း ဟော့ပေါ့ကို မြေအိုးလေးတွေနဲ့ လုပ်ထားတာဆိုတော့ မြေအိုးနံသင်းသင်းလေးနဲ့ မိုက်သား…..
✔️ ✔️ ✔️နောက်ထပ်ဟော့ပေါ့အပြင် မီနူးစုံစုံလင်လင်လည်းရတယ် ကိုယ်တွေဆွဲခဲ့တဲ့ ရှမ်းရိုးရာအစားစာ 😍 😍ပလာတူးမီးရှည်ဆို လုံးဝGood ဘဲ ငါးကြော်ရယ် ၊မုန့်ဖတ်ရယ်ကို ဆလပ်ထဲထည့်ပြီး အချည်နဲ့တို့စားရတာ အဲ့မှာထူးခြားတဲ့အချက်က ကိုယ်တွေတော့ 👍 👍အချည်ရည်ကို 100% Recommend ပေးတယ် တော်တော်ကိုမိုက်တာ လာစားဖူးသူတိုင်းကြိုက်ကြတယ်လို့လည်း ဆိုင်ရှင်ကပြောသေးတယ်ဗျ..။ဈေးကလည်း တစ်ပွဲကို 💰၅၀၀၀ထဲရယ် ပေးရတာနဲ့တန်တယ်နော်.။နောက်ထက်တစ်ခုက 😍 😍 ဝက်နှလုံးပေါင်း သူလည်းမိုက်တယ် သဘာဝဆေးမြစ်တွေနဲ့ပေါင်းထားတာလို့သိရတယ်ဗျ…ဆေးမြစ်နဲ့ပေါင်းထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဆေးနံတွေနံမယ်မထင်နဲ့အုံး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်မှုရှိပြီး အရသာလည်းကောင်းကောင်းစားရအောင် လုပ်ထားပေးတာပါ။ မြေအိုးလေးဟော့ပေါ့ဆိုင်ရဲ့ အစားအသောက်တော်တော်များများကို အနိမ့်ဆုံး 💰 💰 💰 ၂၀၀၀ ကျပ်ကနေ စားလို့ရတာဆိုတော့ ဈေးနှုန်းသက်သာတာကြိုက်တတ်တဲ့ Groupbuyy ရဲ့ Coupon ဘော်ဒါတွေအတွက်တော့ ရှယ်ပါ။
✔️ ✔️ ✔️မြေအိုးလေးဆိုင်မှာ Buffet ကို တစ်ယောက်စာအဝစား 💰 💰11000 ကျပ်နဲ့လည်းစားလို့ရတယ်နော် ။မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာကို အာလာကပ် မှာစားလို့လည်းရတယ်။နောက်ပြီး ဒီလကုန်လောက်ဆို အကင်အစုံကိုလည်း Menu ထပ်တိုးဖို့ရှိနေတာဆိုတော့ အစားအသောက်Crazy တွေအတွက်တော့ ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းတန်အောင်အရသာရှိရှိစားလို့ရတဲ့ ဆိုင်လေးဖြစ်လို့ ကိုယ်တွေကတော့ တော်တော်သဘောတွေ့နေတာဖြစ်လို့ Groupbuyy ကဘော်ဒါတွေကို ပြန် share ပေးတာပါ။
✔️ ✔️ ✔️ကိုယ်တွေအကြိုက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ 🌐Groupbuyy Discount Coupon နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် 💰 💰 Total Bill 10% Discount ရမှာပါ။ဒါ့အပြင် 💫 💫Happy Hour 11:00AM to 3:00PM ဆိုရင် 💰 💰 Total Bill 15 % Discount ရရှိနေပြီနော် ။ 😱 😱Wow….သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် မိသားစုတွေနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် မွေးနေ့ပါတီတို့ အထိန်းအမှတ်ပွဲတို့အတွက် သွားစားကြမည့်သူတွေအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်လုိ့ လက်လွတ်မခံဘဲ Groupbuyy Hot Line 09450067677 ,09450087677 သို့ဆက်သွယ် Booking လုပ်ပြီးသွားလိုက်ကြစို့..။
✔️ ✔️ ✔️Discount Coupon ရရန် ☎️ ☎️Groupbuyy Hotline 09 450067677 ,09 450087677 သို့ ( မြေအိုးလေးဟော့ပေါ့ Total Bill 10 % or 15% ) ဟု SMS ပေးပို့လိုက်ပါ ။မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း မိမိ Mobile Phone ထဲသို့  SMS Coupon Code ပြန်လည်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
💣 💣သတိပြုရန် 💣 💣
ဆိုင်ဖွင့်ချိန်-11:00AM to 10:00PM
🚓 🚓လိပ်စာ 🚓 🚓
ပါရမီလမ်း ၊ ပါရမီစိန်ဂေဟာအနီး ၊ လှိုင်မြို့နယ်
သိမ်ဖြူမှတ်တိုင်အနီးက The Promise Halal
##Groupbuyy Discount Coupon#The Promiss Halal
✔️ ✔️ ✔️Groupbuyy Coupon Coustomer တို့ရေ…လကုန်ရက်လေးကလဲနီးလာပြီဆိုတော့ လကုန်ရင် ဘယ်လိုမျိုးအရသာရှိရှိအစားအသောက်တွေကို ဘယ်လိုနေရာမှာ 🤔 🤔သွားဆွဲရမလဲစဉ်းစားရခက်နေသူတွေအတွက် အချိန်မှီလေး သတင်းပေးပါရစေ…
✔️ ✔️ ✔️Halal Food ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် တော့ သတင်းကောင်းတစ်ခုပါ 👉 👉မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် သိမ်ဖြူလမ်းမှာရှိတဲ့ 🏚️ 🏚️The Promise Halal ဆိုင်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်တယ် ။ဆိုင်လေးကနဲနဲကျဉ်းပေးမဲ့ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုရှိပြီး service လဲတော်တော်ကောင်းတယ် ။နောက်ပြီးဆိုင်မှာ ရနိုင်တဲ့ အစားအသောက်တွေအားလုံးရဲ့အရသာကလည်းတော်တော် Good တယ်ဗျ။ 🍕 🍕ဒီဆိုင်ကPizza ဆို လူကြိုက်တော်တော်များတယ။် 👉cheese တို့ဘာတို့ဆို 👉Switzerland made, 👉Australia made တွေကိုဘဲအဓိကထားပြီးသုံးထားတာ
✔️ ✔️ ✔️ဒီHalal ဆိုင်လေးမှာရနိုင်တဲ့အစားအသောက်တွေရဲ့ဈေးကလဲမဆိုးဘူး အနဲဆုံး 💰 💰 ၁၅၀၀ကျပ်ကနေ စပြီးရတယ်။ 🍕 🍕Pizza ဆို 14000Ks 18000Ks 🍲 🥗Hot Pot ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လဲ နှစ်ယောက်စာ Set Menu ဆို 12000Ks လေးယောက်စာ Set Menu ဆို 20000Ks စသဖြင့် အစားစားရှိတယ်နော်။ 🍔 🍔 🧀 🌯Burger ,Sandwhich တို့ဆို 3000ks,3500ks ,4000Ks စသဖြင့်အစားစားရှိတယ်။အရသာတွေကလည်း တစ်ခါစားကြည့်လိုက်တာနဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါ စားချင်လောက်အောင်ကို အရသာကစွဲဆောင်လွန်းတယ်ဗျ 🌐 🌐။Groupbuyy Discount Coupon လေးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ 💰 💰 Total Bill 30000 ဖိုးအထက်ဆို 🍨 🍦 Ice-Cream တစ်ခွက်လက်ဆောင်ရမှာပါ 💰 💰/50000 ဖိုးအထက်ဆိုရင်တော့ 🍔 🍔 Burger တစ်လုံးလက်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး ဆိုင်ကိုလာမစားဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်လဲ အဆင်ပြေအောင် 👉အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ပေးတဲ့ Delivery ရှိပါတယ်။
✔️ ✔️ ✔️အရသာရှိလှတဲ့ The Promise Halal ဆိုင်က အစားအသောက်ကောင်းတွေကို စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Groupbuyy Hotline 📱 📱 📱 09 4500678677 ,09 450087677 သို့ခုဘဲဆက်သွယ် Booking လုပ်လိုက်ကြအုံးနော်။
⏰ ⏰ဆိုင်ဖွင့်ချိန်-10:00AM to 10:00PM
🚗 🚗 လိပ်စာ
အမှတ် (၁၄၁),သိမ်ဖြူ မှတ်တိုင် သိမ်ဖြူလမ်း မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်
No.141.Thein Phyu Rd.Mingalar Taung Nyunt Tsp.
Hledan Center အောက်ထပ်က Shwe Wang Hot Pot
🌐Groupbuyy.com 🌐#Discount Coupon 🍴 #Yangon #Shwe Wang Hot Pot #up to 20% off
↔လှည်းတန်းစင်တာရဲ့ မြေညီထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Shwe Wang Hot Pot စားဖူးပြီးကျပြီလား ???
↔ဟော့ပေါ့ကိုဘူဖေးပုံစံမျိုးနဲ့တင်မဟုတ်ပဲ Set Menu လေးနဲ့နော်။ Set Menu ဆိုလို့ဈေးကြီးမှာပဲလို့ မထင်နဲ့သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဈေးနှုန်းကအနည်းဆုံး (၈၀၀၀)ကျပ်ကနေအများဆုံး (၁၆၅၀၀)ကျပ်အတွင်းမှာပဲ ရှိတယ်။
↔Set တိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအသီးအရွက်အစုံနဲ့ အသားတစ်ပွဲစီပါပြီးတော့ နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက်စားမယ်ဆို အခြားကိုယ်လိုချင်တာကို တစ်ပွဲချင်းမှာလို့ရတာမို့ အရမ်းတန်တာပဲလို့တောင် ပြောလို့ရတယ်နော်။
↔ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင် အချိုမှုန့်၊ ကြက်သားမှုန့် လုံးဝမသုံးဖူးနော်။ ၀န်ဆောင်မှုကလည်းကောင်းတဲ့အပြင် လက်ဆောင်ပေးတဲ့ ဟင်းပွဲတွေလည်း ပါသေးတယ်နော်။
↔အကယ်လို့ မစားဖူးသေးဘူးဆိုရင် အမြန်ဆုံးသွားရောက်ဖို့ 🌐 Groupbuyy.com.mm မှ 🛎Discount Coupon ထုတ်ယူလိုက်တော့နော်။
Groupbuyy ph: 09 450067677 📱,09450087677 📱 သို့ဆက်သွယ် ပြီး 📱SMS Coupon ထုတ်ယူပြီး သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဖုန်းဆက်ပြီးကူပွန်ထုတ်ရန် အဆင်မပြေသူများအတွက်လည်း website 🌐 link https://goo.gl/HAO1wN သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် ပြီးသော်လည်းကောင်း Discount coupon ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
🎈###Discount Code ရရန် #Groupbuyy ဖုန်းနံပါတ်📱09-450067677, 📱09450087677 သို့ ပို့ ရမည့် SMSနမူနာပုံစံ##
↔Product Code – SWH (မိမိ ထုတ်ယူလိုသော လျော့ဈေးဝန်ဆောင်မှူ)
↔QTY – 1 (သွားရောက်မည့်လူဦးရေ)
↔DTG – 22.5.2017 (မိမိသွားရောက်ဝယ်ယူမည့်နေ့စွဲ)
ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းမှာ နမူနာဈေးနှုန်းဖြစ်ပြီး ကျသင့်ငွေအပေါ် % ဖြင့်ရှင်းပေးရပါမည်။ 🎉
🎉From Monday to Thursday
📍(1)Product Code – SWH 001 (Total Bill 20% at 10 AM-12 PM)
📍(2)Product Code – SWH 002 (Total Bill 15% at 12 PM-2 PM)
📍(3)Product Code – SWH 003 (Total Bill 20% at2PM-5 PM)
📍(4)Product Code – SWH 004 (Total Bill 10% After5PM)
📆From Friday, Saturday and Sunday 📆
📍(1)Product Code – SWH 001 (Total Bill 15% at 10 AM-12 PM)
📍(2)Product Code – SWH 002 (Total Bill 10% at 12 PM-2 PM)
📍(3)Product Code – SWH 003 (Total Bill 15% at2PM-5 PM)
(1)Product Code – SWH 001 (Total Bill 20% at 10 AM-12 PM)
• Normal Price – 8000 Ks
• Groupbuyy Price – 6400 Ks
• (Save Your Money) – 1600 Ks
👉ဟင်းရည်အရသာမှာ အချို၊ မာလာ၊ ဆားချာ၊ မဆလာ၊ ထိုင်ဝမ်ဝက်သားနှစ်ဟင်းရည် (၅) မျိုး ရနိုင်တာမို့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဟင်းရည်ကို မှာယူနိုင်ပါတယ်။
👉ဟင်းရည်အရသာများမှာ တရုတ်နိုင်ငံထိုင်ဝမ်မှ တင်သွင်းထားတာကြောင့် ထိုင်ဝမ်အရသာစစ်ကို ခံစားရမှာပါ။
👉ဟင်းရည်အိုးတစ်ယောက်တစ်အိုးပေးထားပြီးတော့ Set တစ် Set ကို လူနှစ်ယောက် စားနိုင်ပါသည်။
👉အအေးဆိုရင်လည်း Lemon Tea နဲ့သီးစုံ၊နာနာတ်သီး၊ စပျစ်သီး၊ Orange ဆိုပြီး ငါးမျိုးရှိပြီး အခမဲ့ပါ။
👉ထမင်းဖြူ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်၊ ဂျုံခေါက်ဆွဲ၊ ပဲကြာဇံ၊ ထိုင်ဝမ်ဝက်သားနယ်ထမင်း၊ ထိုင်ဝမ်ဝက်သားပဲပြားနယ်ထမင်းကို အခမဲ့ပေးပါမည်။
👉ဆော့စ်က စပ်ပြီးသားလည်း ရှိသလို ဆော့စ်ကောင်တာရှိတဲ့အတွက် ဆော့စ်ကိုယ်တိုင်စပ်နိုင်ပါသည်။
👉အချိုမှုန့်၊ အသားမှုန့်ကို ဆော့စ်ကောင်တာမှာ ထားပေးထားပါတယ်။
👉မိတ်ဆွေတို့ စားသုံးပြီးချိန်တွင် အချိုရည်လက်ဆောင်ပေးပါမည်။
🕜ဆိုင်ဖွင့်ချိန်မှာ မနက် ၁၀ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီထိဖွင့်ပါတယ်။
🌐Groupbuyy Discount Coupon သည် Booking Confirmation Code မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ပ်တို့နေ့စဉ်အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီတင်ပေးလျှက်ရှိသောလျှော့ဈေးသတင်းများမှာ Restaurants, Spas,Things to do , Nightlife , Massages, Salons , Hotels , Education စသည့် Sector များဖြစ်ပြီး ယခုပင်
သင့်အသုံးစရိတ်ကို ချွေတာနိုင်ရန် လျော့ဈေးကူပွန်ထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ…။
🌐www.groupbuyy.com.mm ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှူသည့်အတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ပါသည်…။
No.10, Hledan Center, Underground B1.
Dagon Center2ကိုရောက်ခဲ့ရင် -Happy Family Restaurant လေးရှိတယ်နော်
🌐#Groupbuyy.com #Discount Coupon #Yangon; Dagon Center Shopping Mall2မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ #Happy Family Restaurant လေးမှာ #ကျသင့်ငွေ ၅၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် သုံးဆောင်ပါက Total Bill 10% off ရမဲ့ Promotion လေးက်ိုရရှိနိုင်ရန် #Groupbuyy.com မှတစ်ဆင့် #Discount Coupon အမြန်ဆုံးသာ ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
✔ ✔ရရှိနိုင်မဲ့ အစားအစာတွေကတော့ တရုတ်အစားအစာ၊ ယိုးဒယားအစားအစာ၊ လတ်ဆတ်တဲ့အကင်တွေအပြင် BBQ ကိုပါ တစ်နေရာတည်းမှာ ရနိုင်မဲ့ မြေနီကုန်း၊ ဒဂုံစင်တာ ၂၊ ၅ လွှာမှာဖွင့်ထားတဲ့ Happy Family ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
✔ ✔အစားအသောက်တွေအားလုံးက သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်အောင် လုပ်ပေးထားတဲ့အပြင် ၀ါရင့်စားဖိုမှူးများကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်ပေးတာနော်။
✔ ✔ကဲ ဒီဆိုင်လေးမှာ သွားစားတော့မယ်ဆိုရင် Discount လေးရအောင် Groupbuyy မှတစ်ဆင့် Coupon ထုတ်ယူလိုက်တော့နော်။
✔ ✔#Groupbuyy 📞 📞 ph: 09-450067677, 09-450087677 📞 📞သို့ဆက်သွယ်ပြီး SMS Coupon ထုတ်ယူပြီး သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဖုန်းဆက်ပြီးကူပွန်ထုတ်ရန် အဆင်မပြေသူများအတွက်လည်း 🌐 🌐 🌐 🌐Website Link - https://goo.gl/G6Fj5O သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် ပြီးသော်လည်းကောင်း Discount coupon ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
✔ ✔##Discount Code ရရန် #Groupbuyy ဖုန်းနံပါတ် 09-450067677, 09-450087677 သို့ ပို့ ရမည့် SMSနမူနာပုံစံ##
(1)Product Code – HPF( မိမိထုတ်ယူလိုသော Total bill menu များ)
QTY – 1 (သွားရောက်မည့် လူအရေအတွက်)
DTG – 8.6.2017 (သွားရောက်မည့် နေ့ရက်)
✔ ✔#လတ်တလောရရှိနိုင်သော လျော့ဈေုးအမျိုးအစား##
(1)Product Code – HPF 001 (ကျသင့်ငွေ ၅၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက်ဖြစ်ပါက Total bill 10% off)
Normal Price – 1500 Ks
Groupbuyy Price – 1350 Ks
(Save Your Money) – 150 Ks
သဘာဝအတိုင်း လတ်ဆတ်သော သစ်သီးဝလံများနှင့် လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းသော အသား၊ ငါး၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့အထူးညီညွတ်ပါသည်။
ဆိုင်အပြင်အဆင်မှာ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်၍ ဆိုင်ဝန်ထမ်းများကလည်းဖော်ရွေတဲ့အပြင် ၀န်ဆောင်မှုကလည်း ပြောစရာတောင်မလိုလောက်အောင် ကောင်းမွန်ပါသည်။
ဆိုင်ဖွင့်ချိန်မှာ မနက် ၉ နာရီခွဲမှ ည ၈ နာရီခွဲထိဖြစ်ပါသည်။
ဈေးနှုန်းများမှာ ၁၅၀၀ ကျပ်မှ ၅၀၀၀ ကျပ်အတွင်းသာရှိပါသည်။
Discount coupon code ကို မစားသုံးမီ ပြပေးရန်
Groupbuyy မှ ပေးပို့သော discount coupon ရရှိမှသာ discount ဈေးနူန်းခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်
(မှတ်ချက်-Groupbuyy မှပို့ ပေးလိုက်သော SMS (သို့)www.groupbuyy.com.mm မှ ထုတ်ပေးလိုက်သော Discount Coupon ကို ပြနိုင်ခဲ့လျှင်
discount ဈေးခံစား ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး Coupon Code မပြနိုင်ခဲ့ပါက ပုံမှန်ဈေးဖြင့်သာ ရှင်းပေးရပါမည်။)
🚩 🚩 🚩 🚩##လိပ်စာ ## 🚩 🚩 🚩 🚩
Dagon Center Shopping Mall 2, Level 5, Myay Ni Gone Township.
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းက Thi Fu Restaurant
🌐Groupbuyy.com 🚩#Discount Coupon #Yangon 🍲 🍡#Thai Fu Restaurant 🚩#Up to 50% off #ဗဟန်း #တက္ကသိုလ်၇ိပ်သာလမ်းသစ်
✔လျှာပေါ်မှာစွဲနေစေမဲ့ ထိုင်းအရသာစစ်စစ်စားချင်သူတွေအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ စားဖိုမှုးအတွေ့အကြုံ ဆယ်နှစ်ကျော် ရှိထားတဲ့ စားဖိုမှုးကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ Thai Fu Restaurant မှဟင်းလျာများကို သုံးဆောင်ကြည့်လိုက်ပါ။
✔ဒီ Thai Fu Restaurant လေးဟာဆိုရင် အရသာကောင်းမွန်ရုံသာမက အစားအစာသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့အပြင် ဆိုင်ခန်းအပြင်အဆင် သပ်ရပ်တယ်၊ ဈေးနှုန်းလည်းသင့်တယ်၊ ၀န်ဆောင်မှုလည်း ကောင်းတယ်နော်။
✔ထိုင်းအစားအစာကောင်းကောင်းစားချင်သူများအတွက် Thai Fu Restaurant ကို အထူးလျော့ဈေးနဲ့ သွားရောက်စားသုံးနိုင်ပါပြီနော်။
🌐ဒီတော့ အမြန်ဆုံးသွားရောက်စားသုံးနိုင်ရန် Groupbuyy.com ကနေ Discount Coupon မြန်မြန်လေးသာ ထုတ်ယူလိုက်တော့နော်။
🌐Groupbuyy ph 📱09 450067677, 📱 09450087677 သို့ဆက်သွယ် ပြီး 📱SMS Coupon ထုတ်ယူပြီး သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဖုန်းဆက်ပြီးကူပွန်ထုတ်ရန် အဆင်မပြေသူများအတွက်လည်း အောက်ပါ 🌐 website Link https://goo.gl/cvWjBaသို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် ပြီးသော်လည်းကောင်း ✔ Discount coupon ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
🌐#Website မှတစ်ဆင့် Discount Code ရရန် အဆင်မပြေသူများအတွက် ဖုန်းနံပါတ် 📱09450067677 သို့ ပို့ ရမည့် SMSနမူနာပုံစံ
🔴• Protuct Code – TFR (မိမိရယူလိုသော ၀န်ဆောင်မှုအမျိုးအစား )
🔴• DTG – 15.5.2017 ( သွားရောက်မည့် နေ့ရက် )
🔴(1)Product Code – TFR 001(Total Bill 50% off for Daily Special Food)
🔴(2)Product Code – TFR 002(Total Bill 20% off for BeerCocktails)
🔴(3)Product Code – TFR 003(Total Bill 10% off for Set Menu)
🔴(4)Product Code – TFR 004(Total Bill 10% off)
(1)Product Code - TFR 001(Total Bill 50% off for Daily Special Food )
• Normal Price – 10000 Ks
• (Save Your Money – 5000 Ks)
🔼 🔽 🔼 🔽 🔼 🔽 🔼 🔽 🔼 🔽
(2)Product Code – TFR 002(Total Bill 20% off for Beer Cocktails)
• Normal Price – 3000 Ks
• Groupbuyy Price – 2400 Ks
• (Save Your Money – 600 Ks)
(3)Product Code – TFR 003(Total Bill 10% off for Set Menu)
• Normal Price – 15500 Ks
• Groupbuyy Price – 13950 Ks
• (Save Your Money – 1550 Ks)
🔼 🔽 🔼 🔽 🔼 🔽 🔼 🔽 🔼 🔽 🔼
(4)Product Code – TFR 004(Total Bill 10% off)
• Normal Price – 2500 Ks
• Groupbuyy Price – 2250 Ks
• (Save Your Money – 250 Ks)
(1)Product Code - TFR 001(Total Bill 50% off for Special Menu)
On daily Chef Special Offer from the Menu
(2)Product Code – TFR 002(Total Bill 20% off for Beer and Cocktails)
Enjoy with our Special Beer Cocktails and get 20% Discount
↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔
Set Menu ပေါ်တွင် Total Bill 10% off ပေးပါမည်။
Set Menu မှာ ၂ ယောက်ကနေ ၈ ယောက်ထိရှိပါသည်။
Set 1 တွင် သရက်သီးငါးနီတူခြောက်သုပ်၊ ကြောင်မကြီးသုပ်၊ ပုဇွန်မန်ကျည်းသီးကြော်ချက်၊ ၀က်ဂုတ်သားကင်၊ ငါးသံပုရာပေါင်း၊ မှိုကန်စွန်း၊ ၀က်နံရိုးဟင်းရည်၊ Steamed Rice၊ Dessert တို့ပါဝင်ပါသည်။
Set2တွင် ကြက်ခြေထောက်သုပ်၊ ဂဏန်းပျော့မဆလာ၊ ပုဇွန်ကိတ်၊ ပုဇွန်ကင်၊ ငါးရံ့ဆားကင်၊ အစိမ်းကြော်၊ တုံယမ်းဟင်းရည်၊ Steamed Rice၊ Dessert တို့ပါဝင်ပါသည်။
10% Discount on Total Bill (All Day)7Daysaweek
ဆိုင်ဖွင့်ချိန်မှာ 11:00 AM မှ 11:00 PM ထိဖြစ်သည်။
(မှတ်ချက် - Groupbuyy မှပို့ ပေးလိုက်သော Discount Coupon Code ကို သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်
ကောင်တာသို့ပြသပါကDiscount ဈေးခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး Discount Coupon Codeကို မပြနိုင်ခဲ့ပါက ပုံမှန်ဈေးဖြင့်သာ ရှင်းပေးရပါမည်။)
🔽 🔼 🔽 🔼 🔽 🔼 🔽 🔼 🔽 🔼 🔽 🔼 🔽 🔼
No.81, New University Avenue Road, Bahan Township.
ထိုင်းအစားအစာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက် ပါရမီလမ်းက Royal Thai Restaurant
#Groupbuyy#Discount Coupon #OwayRide # Restaurannt#Royal Thai Restaurant#Food Only 10% Off
🎉 🎉အားလုံအားလုံးဘဲ Groupbuyy ရဲ့ 10% Discount Couponလေးနဲ့အတူ Royal Thai Restaurant ကို့် 🚗 🚗 OWAY RIDE Taxi Service နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် 2000 ကျပ်သက်သာမည့် အခွင့်ရေးလေးကိုအရယူလိုက်ပါ……. 🎉 🎉
🎉 🎉OWAY RIDE App ရဲ့ 2,000 ကျပ်သက်သာမည့် အခွင့်အေ၇းရရှိနိုင်ရန် OWAY RIDE Appထဲတွင် Promo Code –OWAYGB01 ဟုရိုက်ထည့်ပေးရပါမည်။ှ ဒါဆိုရင်မိမိသွားလိုတဲ့ နေရာကို ၂၀၀၀ ကျပ် taxi ခ သက်သာပြီနော် Groupbuyy Customer တို့ ရေ။
✔️ ✔️ ✔️Groupbuyy Customer များအတွက် ဒီတစ်ပါတ်မှာတော့ ရှူးရှူးရှဲရှဲ ပူပူစပ်စပ်လေးကိုမှစားချင်တဲ့သူများအတွက် အရသာလည်းကောင်းပြီး နေရာထိုင်ခင်းကလည်းကျယ်ဝန်းတဲ့ ပါရမီလမ်းနဲ့ ကျောက်ကုန်းလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ Royal Thai Restaurant လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
✔️ ✔️ ✔️10% off Discount coupon အခမဲ့ ထုတ်လို့ရအောင် နည်းလေးလည်းအောက်မှာထည့် ပေးထားတယ်နော်
(ဒီလို အခမဲ့ကူပွန်လေးတွေ အမြဲ သတင်းမပျက်စေဖို့ GROUPBUYY ကို LIKE & SEE FIRST လုပ်ထားကြအူးနော်)
✔️ ✔️ ✔️ဒီဆိုင်လေးကတကယ်ယိုးဒယားအစားအစာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်သွားသင့်တဲ့ဆိုင်လေးလို့ Admin က Recommend ပေးလိုက်တယ်နော် Hot Pot တို့ BBQ တို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း Set Menu လေးတွေနဲ့စိတ်ကြိုက်မှာစားလို့ရတာဆိုတော့လုံးဝအမိုက်ပဲ။Chef တွေကလည်းယိုးဒယားက Chef နှစ်ယောက်ကိုယ်တိုင်အစားအသောက်များကိုချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်အစားအသောက်တွေရဲ့အရသာကတော့ယိုးဒယားအရသာစစ်စစ်ကိုစားသုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စားသုံးသူများအတွက် စိတ်ကျေနပ်စေမှုရရှိစေမှာပါ။ဒါ့အပြင် ↔️ Royal Thai Restaurant ရဲ့ အမိုက်ဆုံးအချက်ကတော့ ကားပါကင်ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိခြင်းပါ ဒီဆိုင်လေးက ခြံဝန်းကျယ်ကြီးထဲမှာရှိတာကြောင့် မိမိတို့ကားရဲ့ လုံခြုံရေးကိုလည်းစိတ်ပူစရာမလိုဘဲ အေးဆေး စားသုံးနိုင်တယ်လေ ။Royal Thai မှာကယိုးဒယားအစားအစာတွေသာမကဘဲ အသောက်တစ်လိုင်း ကိုကို မမ တွေအတွက်လည်း Wine , Beer ,Cocktails မျိုးစုံပါရသေးတာဆိုတော့ လုံးဝအလွင့်ဘဲ။ဒါ့အပြင် မိမိတို့ရဲ့ Birthday ,Anniversary,company staff party စသဖြင့် party များကိုလည်း မိမိတို့ရဲ့စိတ်တိုင်းကျ ဝန်ဆောင်မှုပေးသေးတာနော်။ဈေးနှုန်းတွေကလည်းလူတိုင်းစားသုံးနိုင်အောင်အနဲဆုံး 💰 💰 3500Ks ကနေ အများဆုံး 13500Ks သာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းတွေကလည်းသက်သာတဲ့အပြင်အခုဆိုရင် Special Discount တွေပါရှိနေတော့အရမ်းမိုက်တယ်နော်။
✔️ ✔️ ✔️ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အမှတ်တရအချိန်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဒီဆိုင်လေးကို သွားမယ်ဆိုရင် အထူးလျော့ဈေး Discount နဲ့သွားနိုင်ရန် အခုဘဲ Groupbuyy မှ Discount Coupon ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
Discount Code ရရန် Groupbuyy ဖုန်းနံပါတ် 09450067677, 09450087677 သို့ (Royal Thai Restaurant Food Only 10% off ) ဟုရိုက်၍ SMS ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမိမိ Mobile Phone ထဲသို့ SMS ပြန်လည်ပေးပို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
🎉 🎉OWAY RIDE Taxi Service ရဲ့ 2000ကျပ်သက်သာမည့် အခွင့်အေ၇းရရှိနိုင်ရန် OWAY RIDE Appထဲတွင် Promo Code –OWAYGB01 ဟုရိုက်ထည့်ပေးရပါမည်။ှ Sim Card တစ်ခုကို ၂ကြိမ်သာသုံးခွင့်ရှိပါသည်။ 🎉 🎉
🚗 🚗လိပ်စာ 🚗 🚗
ဆိုင်(၁) ရတနာလမ်း ကျောက်ကုန်း ရန်ကင်းမြို့နယ်
ဆိုင်(၂) ပါရမီလမ်း ရန်ကုန်
ဆူ၇ှီကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် ဗဟန်းမြို့နယ် ဓမ္မစေတီလမ်းပေါ်က Sushi Tei
#Groupbuyy.com #Discount Coupon #Yangon #Sushi Tie Restaurant
🔴ဂျပန်အစားအစာမျိုးစုံရရှိနိုင်တဲ့အပြင် ဂျပန်ဆူရှီအရသာစစ်စစ်ကို ဂျပန်ကနာမည်ကြီးဟိုတယ်တွေရဲ့ အရသာအတိုင်း ခံစားနိုင်စေဖို့အတွက် Groupbuyy ကနေ Sushi Tei Resturant လေးကို ခုပဲမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီနော်။
🔴ဂျပန်အစားအစာနဲ့မီနူးပေါင်း (၃၀၀)ကျော်ကို အကြော်၊ အချက်၊ အကင်၊ အပြုတ်၊ အသုပ်၊ Soup ပုံစံမျိုးစုံရပါတဲ့အပြင် အခြား Dessert နဲ့ Drinks တွေလည်းအစုံရပါသေးတယ်နော်။
🔴ဆိုင်ပုံစံကလည်း ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိတဲ့အပြင် Service ပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်လို့လည်း စိတ်ကျေနပ်မှုရစေမှာပါ။
ပုံမှန်စားပွဲဝိုင်းတွေအပြင် သီးသန့်ခန်းလည်းရှိတဲ့အတွက် Meeting လည်းလုပ်လို့ရတယ်။ ပွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Hall ခန်းလေးရှိသေးတယ်။ သပ်သပ်တစ်ပွဲချင်းစီမှာစားလို့လည်းရသလို Conveyor Belt ပုံစံလေးနဲ့လုပ်ပေးထားတာဆိုတော့ ကိုယ်စားချင်တာလေးတွေ တွေ့ရင် လှမ်းယူပြီးစားနိုင်အောင်လည်းစီစဉ်ထားတယ်နော်။
🔴ဒီတော့ အထူးလျော့ဈေး Discount နဲ့သွားနိုင်ရန် အခုဘဲ ……groupbuyy မှ Discount Coupon ထုတ်ယူလိုက်ပါ။ Groupbuyy ph ✔09 450067677, ✔09450087677 သို့ဆက်သွယ် ပြီး SMS Coupon ထုတ်ယူပြီး သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဖုန်းဆက်ပြီးကူပွန်ထုတ်ရန် အဆင်မပြေသူများအတွက်လည်း အောက်ပါ website Link ----------- သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် ပြီးသော်လည်းကောင်း Discount coupon ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
🌐#Website မှတစ်ဆင့် Discount Code ရရန် အဆင်မပြေသူများအတွက် ဖုန်းနံပါတ် ✔ 09450067677 သို့ ပို့ ရမည့် SMSနမူနာပုံစံ
🔼• Protuct Code – SST (မိမိရယူလိုသော couponsအမျိုးအစား )
🔼• Qty - 1 ( သွားရောက်မည့် လူဦးရေ )
🔼• DTG – 15 .5. 2017 ( သွားရောက်မည့် နေရက် )
Product Code – SST 001 (Total Bill 10% off)
• Normal Price − 4000 Ks
• Groupbuyy Price – 3600 Ks
• Save your money − 400 Ks
ဂျပန်အစားအစာတွေမီနူးအစုံရပါတယ်။ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ထိုင်လို့ကောင်းပြီး အေးအေးဆေးဆေးရှိတဲ့အပြင် Service ပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်လို့လည်း စိတ်ကျေနပ်မှုရစေမှာပါ။ ဂျပန်အရသာစစ်စစ်ကို ခံစားရစေမှာပါ။
ဆိုင်ဖွင့်ချိန်မှာ မနက် ၁၀ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီထိ ဖြစ်ပါသည်။
🌐www.groupbuyy.com.mm ဆိုတာ မြန်မာပြည်ရှိအမြို့မြို့အနယ်နယ်တိုင်းမှာရှိသော လျှော့ဈေးသတင်းများကို အလွယ်ကူအရိုးရှင်းဆုံးနည်းဖြင့်အချိန်နှင့် တပြေးညီ သတင်းပေးလျှက်ရှိနေပါပြီ…။
Customer များအနေနဲ့ ကူပွန်အသုံးပြုရာတွင် အဆင်မပြေမှု များဖြစ်ပေါ် ပါက Customer Care Hotline 🚩09-450067677
www.groupbuyy.com.mm ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှူသည့်အတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အမှတ်(၁၂၆)၊ ဓမ္မစေတီလမ်းမပေါ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်
Indian အစားအသောက်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူတွေအတွက် အလုံမြို့နယ်က Marina India Restaurant
💯 💯India အစားအသောက်ကောင်းကောင်း ၊ 🚐 🚐 🚌 ကားပါကင်ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း ၊ 🚩၀န်ဆောင်မှုကောင်းပေ့ ၊ India က စားဖိုမှူးတွေ ကိုယ်တိုင် သင့်ကိုချက်ပြုတ် ပေးတဲ့ Marina India Restaurant နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီနော် coupon hunter တို့ ရေ။
✔ ✔ ✔Groupbuy.com.mm အဖွဲ့ သားတွေက တော့ တစ်ဝဆွဲခဲ့ ပြီးပြီဆိုတော့ ဘာလေးတွေ စားကောင်းတယ်ဆိုတာ ပြောပါရစေ။
✔ ✔ ✔Marinaဆိုတဲ့ နံမည်လေးကတော့ India တောင်ပိုင်း ချနုိုင်းမြို့ မှာရှိတဲ့ World’s Longest ပင်လယ်ကမ်းခြေရဲ့ နာမည် ဆိုတာကို ဂျာကြီးက စိတ်ရှည်ရှည်ရှင်းပြပေးသေးတယ်။တောင်ပိုင်း ရုိုးရာ ဟင်းလျာ တွေရဲ့ အရသာ အပြည့်ခံစားလို့ ရမဲ့ နေ ရာလို့ လည်းပြောသေးတယ်။
✔ ✔ ✔ကြယ်ငါးပွင့် ဟော်တည်တစ်ခုမှာရှိရမဲ့ မီးဖို ဆောင်ပြင် ဆင်မှုတွေကို ရှိတဲ့ နေရာဆိုတော့ ဟော်တည်မှာ သွားစားနေရတဲ့ feeling အပြည့် ခံစားလို့ ရမဲ့နေရာဖြစ်တယ်နော်။ဈေးနှုန်း တွေ ကတော့ ၅၀၀၀ ကနေ ၁၅၀၀၀ ၀န်းကျင်ထိ menu တွေ၇ှိတယ်နော်.
🍴 🍴 🍴ဒံပေါက် ရယ် Masala Tea ☕ရယ်; ကူဖီမလိုင် ကတော့ ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ မဖြစ်မနေ မြည်းစမ်းသင့်တဲ့ Menu လေးတွေပါ။ ဒံပေါက်ဆိုလို့လန် မ့သွားနဲ့ဦး ။အဆီ သိပ်မပါဘူး အီလည်းမအီဘူး ဆိုတော့ ၀ိတ်တတ်မှာ ကြောက်တဲ့ သူတွေအတွတ်သာ မက လူကြီးတွေအတွတ် အဆင်ပြေတဲ့ ဒံပေါက်ပါ။ပြီးတော့ အစားနဲ တဲ့သူတွေအတွတ် တစ်ပွဲဆို ၂ ယောက် ၃ ယောက်လောက်တောင် ခွဲစားလို့ ရတဲ့ အနေအထား။
✔ ✔ ✔ ဒါနဲ့ တခြား Menu လးတွေဖြစ်တဲ့ ကြက်ဆာတေး ၊ငါးကင် ကတော့အကင်သမားတွေအကြိုက်ပါ။ ထူးခြားတာက သူတို့ ဆီမှာ Seafood Market ဆိုတဲ့ ကောင်တာလေးရှိတယ်။လက်လက်ဆတ်ဆတ်လေးတွေရွေးပြီးကင် ခိုင်းလို့ ရတယ်။
✔ ✔ ✔အော်...ဒါနဲ့အကင် အကြောင်းပြောတော့ အသောက်သမားတွေအတွတ် ဘာရှိလဲဆိုတာ တွေး နေလောက်ပြီပေါ့။မပူနဲ့🍷 🍷 🍷၀ိုင် နဲ့mini Bar လေးထားပေးထားတယ် ။Heavy Food မစားချင်လည်းအေးအေးဆေးဆေးပေါ့ပေါ့ ပါးပါးသောက်ရင်းစားရင်း စကားဖောင်ဖွဲ့ လို့ရ တယ်။
သီးသန့် အခန်းလေးတွေနဲ့ ဖိတ်ကြွေးချင်သူတွေ ၊Lunch စားချင်သုတွေအတွတ် Private အခန်းလေးတွေထားပေးထားတယ် ၂၀၀၀၀ တော့ကျသင့်မယ်။
✔ ✔ ✔မနက်စောစော Breakfast စားချင် ရင်လည်း မနက်စောစော ၇ နာ၇ီထဲက Breakfastပါ မှာ စားလို့ ရတယ်နော်။
🌞 🌞 🌞ကဲဘာတွေ ထူးခြားထားတွေ ရှိလဲသိပြီဆိုတော့ မသွားပြီ 🌐www.groupbuy.com.mm ကနေ မိမိစားသုံးတဲ့ ကုန်ကျစရိတ် ပေါ်မှာ Discount Coupon 10% ထုတ်သွားလိုက်တော့နော်။ 🌐website ကနေ Discount Coupon ထုတ်ယူဖို့ အခတ်အခဲရှိတဲ့သူတွေ အတွတ် groupbuyy.com ရဲ့ ဖုန်း ✔09450067677/ ✔09450087677 ကိုခေါ်ပြီး တော့ 10% off coupon SMS ပို့ ခိုင်းလို့ လည်းရသေးတယ်နော်။
ဖုန်းမဆက်ချင်ရင်တော့ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔09450067677/09450087677 ↔ ↔ ↔ကို 🐡( MARINACOUPON ) ↩လို့ သာ SMS ရုိုက်ပြီးပို့ လိုက် မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း Discount Coupon အခမဲ့ ပြန်ပို့ ပေးလာပါလိမ့်မယ်။စားသုံးပြီးရင် waiter ကို ဖြစ်ဖြစ် ငွေရှင်းကောင်တာကိုဖြစ်ဖြစ် SMS ကူပွန်ပြလိုက် လျော့ပေးလိမ့်မယ်။ ကဲဘာလို သေးလဲ။
🔺 🔺သတိပြုရန် 🔺 🔺
ဆိုင်ဖွင့်ချိန်မှာ နံနက် ၇ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီထိဖြစ်ပါသည်။
🚌 🚌 🚌 🚌#လိပ်စာ# 🚌 🚌 🚌 🚌
အမှတ် ၆၃ ၊တော်ဝင်လမ်း ၊ အလုံမြို့ နယ် ၊ရန်ကုန်
တာမွေမြို့နယ်က ပင်လယ်စာကြိုက်သူတွေအတွက် Monster Shrimp Sea Food
#Groupbuyy ✌#Free Discount Coupon #Seafood 🦀 🦀 #Monster Shrimp 🐙 🐙 🐙
✔ ✔ ✔ပင်လယ်စာကြိုက်တဲ့ groupbuyy Coupon hunter တွေအတွတ် သက်သက်သာသာ သွားရောက်စားသုံးနုိုင်အောင် Monster Strimp Seafood House ကို ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်နော်။
✔ ✔ ✔Discount Coupon လေးကတော့ 💯 ၁၅% ကနေ 💯၂၀% ထိရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ကူပွန်အခမဲ့ ထုတ်ယူနည်းလေးကို အောက်မှာ ထည့် ပေး ထားတယ်နော်။
🦀 🦀 🦀Monster Shrimp Myanmar ဆိုတာကတော့နံမည်နဲ့ လိုက်အောင် ပင်လယ်စာဆို တစ်ဝ ဆွဲချင်တဲ့ သူတွေကို ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်လေးပါ။ထိုင်းနုိုင်ငံမှာလည်း နံမည်ကြီးတဲ့ ပင်လယ်စာဆိုင်တခုပါ။ပုဇွန် ကို အကောင်ကြီးကြီး ပင်လယ်စာစုံစုံ ကို မိသားစု လိုက်ဖြစ်ဖြစ် ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ပင်လယ်စာ ကြိုက်တတ်တဲ့ ချစ်သူလေးနဲ့ ဘဲဖြစ်ဖြစ် သွားရောက်မြည်းစမ်းသုံးဆောင်သင့်တဲ့ နေရာလေးတခုပါ။
✔️ ✔️SMSကူပွန်ထုတ်ယူချင်ရင်တော့ groupbuyy Hotline 📞09450067677/ 📞09450087677 ကို ↔ ↔“Monsterstrimpcoupon “ ↔ ↔ဆိုပြီး SMS ပို့ လိုက်ရုံပါဘဲ။မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း SMS coupon ပြန်ပို့ လာပေးပါလိမ့်မယ်။
✔ ✔ ✔Mon day to Fri day (Sat day- Sun day ) မပါ နေ့လည် ၁း၀၀ မှ ၄း၀၀(Happy hour)အချိန် အတွင်းလာစားရင် Total Bill Food ပေါ်မှာ(၂၀%)off ပေးပါတယ်။Drink တော့မပါဘူး။
✔ ✔ ✔ပုံမှန်ဆိုင်ဖွင့်ချိန်11:00 am မှ 10:00 pm အတွင်းလာစားရင်တော့Total bail ပေါ်မှာ 15%off ရပါတယ်။ Food Only Discount နော် ။ Drink ကတော့ discount မပါဘူးနော်
ဈေးနှုန်း အနေထားကတော့ ၂၈၀၀ ကနေ အများဆုံး ၆ ယောက်စာပွဲကြီး ၄၈၀၀၀ ထိ၇ှိပါတယ်.
✔ ✔ ✔အစပ်သိပ်မစားနိုင်တဲ့ Customer တွေအတွက်လည်းစိတ်ပူစရာတော့မလိုဘူးဗျ။မိမိစားနိုင်တဲ့အနေကိုပြောပြီးမှာလို့ရတ ယ်နော်။
✔ ✔ ✔Sea Food တွေစားပြီးစပ်နေရင်ကျေန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးအရသာရှိတမူထူးခြားတဲ့ 🍹 စပါးလင်ဖျော်ရည်လေးကိုမှာသောက်ကြည့်လိုက်ပါ။ဆိုင်တော်တော်များများမှာမရှိတဲ့ organic Juice လေးတခုပါ။ပျားရည်၊လိုက်ချီးရည်၊သံပရာရည်၊နုနယ်တဲ့စပါးလင်တွေကိုရောပြီးဖျော်ထားတာ ဆိုတော့ချိုချိုမွေးမွေးလေးနဲ့အရမ်းသောက်လို့ကောင်းတယ်နော် ။
🍹 🍹 🍹Thai Tea Mix ...အဲဒါလေးလဲကောင်းတယ်။အေ၇ာင်လေးရော အနံ့ အရသာလေးပါကောင်းတယ် ချိုမွှေးမွေးလေးနဲ့ဖန်တန်တန်လေးကထူးခြားတဲ့အရသာတခုကိုပေးစွမ်းတယ် အစပ်စားပြီးသားသူတွေအတွက်ကတော့အကောင်းဆုံး ဘဲနော်
🚫 🚫 🚫(မှတ်ချက် - Groupbuyy မှပို့ ပေးလိုက်သော Discount Coupon Code ကို သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်
🚐 🚐 🚐လိပ်စာ.. 🚐 🚐 🚐 🚐
.No..113 လေးထောင့်ကန်လမ်း တာမွေလေးမြို့နယ်
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Gandamar Hot Pot & BBQ-
💯 💯#အ၀စား 💯#Hotpot #BBQ ✔#Groupbuyy #Discount Coupon 🍜 🍜#မရမ်းကုန်းကGandamar Garden BBQ & Hotpot
✔ ✔ ✔Hot Pot နဲ့အကင်မျိုးစုံကို အမုန်းစွဲလို့ရမဲ့ဆိုင်ကောင်းကောင်း်လေးတစ်ဆိုင် တွေ့ ထားတယ် ဗျို ။ Hot Pot နဲ့ BBQ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ကွက်တိ ဘဲနော်။Hot Pot မှာဆိုရင် ဟင်းရည်ရဲ့ အရသာကအဓိက ဘဲလေ….Gandamar Garden မှာဟင်းရည်အရသာ(၃)မျိုးရှိတယ်။ကြိုက်တာစား သူ့အရသာတွေကရှယ်ဘဲလေ။ BBQ ကင်မယ်ဆိုရင်လဲ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ ကြက် ၀က် အမဲ အသားတွေကို ပါးပါးလေးတွေလှီးထားပေးတော့ ကင်ရတာပိုအဆင်ပြေတာပေါ့။အော်ဒါနဲ့ ထမင်းကြော်၊ကြာဇံကြော် ၊ဘဲကင် ဒါတွေလဲရတယ်ဗျို့။
✔ ✔ ✔Discount Coupon လေးကတော့
Monday to Friday ဆိုရင် ၄ ယောက် ၁ ယောက် Free ပါ
Saturday & Sunday ဆိုရင် တစ်ယောက်စာအဝစား 11800 ကို 10 % ပါ
Tax & Service Charge က 15% ပါ
✔ ✔ ✔Sauce ကောင်းမှ BBQ တို့ Hot Pot တို့ကအရသာရှိတာလေ…Gandamar Garden မှစာဖိုမှူးကြီးကိုယ်တိုင်စပ်ထားတဲ့ Home made sauce ဆိုတော့အရသာပိုကောင်းတာပေါ့။အချိုကြိုက်တဲ့ Customer များအတွက်အထူးသင့်တော်ပြီး ဘယ်အသားနဲ့မဆိုလိုက်ဖက်တဲ့ Sauce တစ်ခုပါ။သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ ပဲမဲ ရဲ့အနှစ်ကိုအခြေခံပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ Black Bean Sauce နဲ့အကင်ဖိုပေါ်က အသားရဲ့ အရသာကို သွားမြည်းကြည့်ရင် လျှာလည်သွားလိမ့်မယ်။
✔️ ✔️ ✔️SMSကူပွန်ထုတ်ယူချင်ရင်တော့ groupbuyy Hotline 📞09450067677/ 📞09450087677 ကို ↔ ↔(Gandamarcoupon 10% off) ↔ ↔ဆိုပြီး SMS ပို့ လိုက်ရုံပါဘဲ။မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း SMS coupon ပြန်ပို့ လာပေးပါလိမ့်မယ်။
✔ ✔ ✔ Sauce အရသာကလည်း(၈)မျိုးတောင်ဆိုတော့ စားရတဲ့ အရသာလေးတွေက အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်။ ဆာတေးအရသာလေးရောက်သွားလိုက် ၊ Korea အကင်အရသာလေးရောက်သွားလိုက်၊ Japan အသားကင်အရသာလေးဖြစ်သွားလိုက်နဲ့ Style မျိုးစုံနဲ့အသားကင်တွေကိုတနေရာ ၊တဆိုင်ထဲမှာစားလိုက်ရသလိုမျိုးကိုဖြစ်နေတာ။ဘဲကင် ဆိုရင်လဲစားလို့ကောင်းမှကောင်း ၊မိုက်မှမိုက် အခြားအရံဟင်းတွေ၊ အကြော်တွေ၊အသုတ်တွေ၊အကင်တွေမှအများကြီးဘဲအမုန်းသာဆွဲကြပေတော့ ဗျို့ 
✔ ✔ ✔တခြားဆိုင်တွေနဲ့မတူတဲ့ ထူးခြားမှုလေးတခုကဘာလဲဆိုရင်…..ဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့သာယာစိမ်းလန်းတဲ့မြက်ခင်းပြင်လေးတခုပေါ်ရောက်ရှိသွားသလိုမျိုးခံစား၇ပါတယ်။ပြီးတော့မြက်ခင်းပြင်လေးပေါ်ကသံစည်ပိုင်းခုံလေးတွေပေါ်မှာထိုင်ပြီးစားရတဲ့ အရသာလေးကခံစားမှုလေးတမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ ရေး ရင်းနဲ့ ဗိုက်စာလာပြီ ။ ကဲ သွားလိုက်မြည်းလိုက်ကြအူးနော် Groupbuyy Coupon Hunter အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ ။
🚫 🚫 🚫(မှတ်ချက် - Groupbuyy မှပို့ ပေးလိုက်သော Discount Coupon Code ကို သက်ဆိုင်ရာငွေရှင်း
🚫OPEN TIME 11:00 AM - 11:00 PM
🚫Groupbuyy Discount Coupon သည် Booking Confirmation Code မဟုတ်ပါ။
🚫၀ယ်ယူစားသုံးသူများ သက်သာအောင် Discount Coupon များထုတ်ပေးသော Company ဖြစ်သည်။
No.132,Gandamar Street, Mayangone
Yangon — with Gandamar Garden BBQ & Hotpot Buffet at Gandamar Garden BBQ & Hotpot Buffet.
တောင်ဥက္ကလာက DIY Hot Pot & BBQ
#Groupbuyy #Discount Coupon #DIYHotpot & BBQ #Up to 15%off for total bill
#Hotpot & BBQ မှာဆိုရင် အကောင်းဆုံးသောအရသာများကိုသာ လူကြီးမင်းများအတွက် ပေးစွမ်းနိုင် တဲ့ #DIY Hotpot & BBQ # ဆိုင်ရဲ့ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော အရသာအရှိဆုံး Hotpot Buffet & A La Cart Menu များကို အထူးလျော့ ဈေးနှူန်းထားများ နှင့် အ၀စားသုံးဆောင်ချင်သူများ အခုပဲ Groupbuyy သို့ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
#Groupbuyy ph: 09450067677 သို့ဆက်သွယ် ပြီးSMS Coupon ထုတ်ယူပြီး သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ်ဖုန်းဆက်ပြီးကူပွန်ထုတ်ရန်အဆင်မပြေသူများအတွက်လည်းwww.groupbuyy.com.mm Website သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် ပြီးသော်လည်းကောင်း Discount coupon ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
###Discount Code ရရန် #Groupbuyy ဖုန်းနံပါတ်09-450067677 သို့ ပို့ ရမည့် SMSနမူနာပုံစံ##
(1)Product Code – DIY 001 (မိမိ ထုတ်ယူလိုသော လျော့ဈေးဝန်ဆောင်မှူ)
• QTY – 1 (သွားရောက်မည့်လူဦးရေ)
• DTG – 27.10.2016
##လတ်တလောရရှိနိုင်သော Hotpot Buffet & A La Cart လျော့ဈေးအမျိုးအစား##
(1)Product Code – DIY 001 (Happy Hours for Total Bill 15% off)
### Hotpot Buffet & A La Cart ၏ ထူးခြားချက် ####
Set Menu များ၏ဈေးနှူန်းမှာ ၈၀၀၀ ကျပ် မှ ၁၅၀၀၀ ကျပ် အထိရှိပါသည်။
ကြက်သား ၊ ၀က်သား ၊ အမဲသား ၊ ဆိတ်သား စသည့် အသားမျိုးစုံရရှိနိုင်ပြီး
Set Menu တပွဲတွင် အနည်းဆုံးလူနှစ်ယောက်စာ စားသုံးနိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Set Menu တပွဲတွင် အသား အရွက် အရည် အစုံပါဝင်ပါသည်။
လျော့ဈေး ကူပွန်ကို 11 am မှ4pm အတွင်းသာ အသုံးပြုခွင့်ရှိမည် ဖြစ်သည်။
မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ မှာယူစားသောက်ပြီး စုစုပေါင်း ကျသင့်ငွေ၏ ၁၀% လျော့ဈေးခံစားခွင့်ရှိမှာဖြစ်သည်။
### About DIY Hotpot & BBQ ###
သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော ဆိုင် အပြင်အဆင်လေးတွေနဲ့အတူ အရသာအထူး ကောင်းမွန်ပြီးလတ်ဆတ်တဲ့ ဟော့ပေါ့ ဘူဖေး ကိုစိတ်ချမ်းမြေ့စွာစားသုံး နိုင်ခြင်းနွေးထွေးပျူဌာသော ၀န်ထမ်းများနှင့် စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ဂရုစိုက်မှူ များကြောင့် လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကျေနပ်မှူအပြည့်အ၀ ရစေမှာ ပါ။
### သတိပြုရန် #####
++ ဆိုသည်မှာ Government Tax နှင့် Service Charge တို့ဖြစ်သည်။
Discount Coupon အသုံးပြုရမည့် အချိန်မှာ နေ့ခင်း ၁၁း၀၀ မှ ညနေ ၄နာရီ အထိဖြစ်သည်။
DIY ဆိုင်၏ Member Card နှင့် တွဲ ပြီး Groupbuyy Discount Coupon ကို အသုံးပြုလို့မရပါ။
Discount Coupon မှာ Total Bill ၏ ၁၅% လျော့ဈေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
#### လိပ်စာ ######
No.(95/F) Waizayandar Street ., (3) Quarter , South Okkalapa Tsp.,
ရွှေဂုံတိုင်မှာရှိတဲ့ Hot Pot Valley
🌐#Groupbuyy.com 🔖 #Discount Coupon 20% off #Yangon #ရွှေဂုံတိုင် လမ်းမကြီးပေါ်က
✔ ✔စားကြမယ်ဟေ့ Hotpot ပူပူစပ်စပ်လေး
✔ ✔ ဒီတစ်ခါကတော့ Hot Pot ကြိုက်တဲ့ မိတ်ဆွေတို့အတွက် မကြာသေးခင်ကမှ ဖွင့်လိုက်တဲ့ ရွှေဂုံတိုင်က Hot Pot Valley ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပါ။
✔ ✔ဆိုင်ကဖွင့်တာမကြာသေးလို့ အရသာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ မထင်နဲ့နော် တစ်ခါစားကြည့်ရုံနဲ့ နောက်ဆို Hot Pot Valley မှာပဲစားတော့မယ်လို့ ဖြစ်သွားမှာနော်။ Hot Pot အပြင် အခြား Menu လေး တွေ ဖြစ်တဲ့ မာလာရှန်းကော နဲ့ထမင်းကြော် တွေပါ ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ အမြန်သွားနိုင်အောင် 🌐 Groupbuyy.com ကနေ Discount Coupon အခမဲ့တောင်းထုတ်ယူလိုက်တော့နော်။အော်ဒါနဲ့ဆိုင်က နှစ်ထပ်ဆိုတော့ သူငယ်ချင်း၊မိသားစုအုပ်စုလိုက်သွားစားရင်တောင် နေရာမရမှာ မပူရဘူး ။
🌐#Groupbuyy.com ✔ph: 09450067677, ✔09450087677 သို့ဆက်သွယ်ပြီး ဖုန်းSMS Coupon ထုတ်ယူပြီး သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ်ဖုန်းဆက်ပြီးကူပွန်ထုတ်ရန် အဆင်မပြေသူများအတွက်လည်း Website link - https://goo.gl/PccaSL သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် ပြီးသော်လည်းကောင်း Discount coupon ထုတ်ပြီးသွားရင် အသုံးစရိတ်သက်သာတာပေါ့။
✔ ✔ဖုန်းလည်းမဆက်ချင်ဘူး၊website ကနေ coupon ယူဖို့ အခက်အခဲရှိနေရင်
✔ ✔#Groupbuyy.com ဖုန်းနံပါတ် 09-450067677,09450087677 ကိုသာ SMS ရိုက်နှိပ်ပေးပို့ပြီး ကူပွန်ထုတ်ယူလိုက်ပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း coupon သင့်ဖုန်းထဲသို့ ပြန်ပို့ ပေးလာပါလိမ့်မယ်။
✔ ✔ဆိုင်ဖွင့်ချိန် ၁၂ နာရီကနေပြီးတော့ ညနေ ၅ နာရီထိ Happy Hour အတွက် Total Bill 20% ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ကူပွန်ရယူလိုပါက ↔ ↔ ↔Hot pot Valley Total Bill 20% ↔ ↔ ↔ဟူု၍ SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
✔ ✔ညနေ ၅ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီထိကိုတော့ Total Bill 15% ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ကူပွန်ရယူလိုပါက ↔ ↔ Hot pot Valley Total Bill 15% ↔ ↔ဟူု၍ SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
👌ရှုးရှူးရှဲရှဲ အသာကောင်းလျာရည်လည်မဲ့ မာလာ့ရှန်းကော
👌မိမိbudget ပေါ်မူတည်ပြီးလိုသလောက်မှာစားလို့ ရတယ်
👌အသားကောင်းကောင်းကိုမှ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွတ်နုိုင်ငံခြားက သွင်းလာတဲ့အမဲသား
👌အဖွဲ့ လိုက်သွားရင် အေးအေးဆေးဆေး နားလို့ ရမဲ့ အပေါ်ထပ်
👌Hot Pot အပြင် အခြား Arlacart Menu လေးတွေပါ ရနိုင်တဲ့ဆိုင်လေး
👌ဟင်းရည်အရသာ Orginal, Spicy, Extra Spicy ဆိုပြီး (၃) မျိုး
👌သဘောကောင်း ပြီးမျက်နှာချိုတဲ့ ဆိုင်ရှင် နဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ပျူ၎ာမှု နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကဲဘာလိုသေးလဲကွယ်
ဆိုင်ဖွင့်ချိန်မှာ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီထိဖြစ်ပါသည်။
🌐##Groupbuyy ဆိုသည်မှာ 🌐……
No.239, East Shwe Gone Daing Road, Bahan Township.
ကရဝိတ်နန်းတော်ကြီးထဲက International Buffet Dinner
#Discount Coupon #Karaweik #International Buffet Dinner #MyanmarTraditional Dance #Groupbuyy
✔️ ✔️ ✔️ကရ၀ိတ်နန်းတော်ကြီးထဲမှာ ရှေးခေတ်မြန်မာတို့၏ အက ၊ အလှများကိုကြည့်ရှုခံစာြး့ပီး ဈေးနှူန်းချိုသာသောအထူးလျော့ဈေးများဖြင့် International Buffet Dinner များကိုစားသုံးနိုင်ရန် ယခုဘဲGroupbuyyသို့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
✔️ ✔️ ✔️Discount Code ရရန် #Groupbuyy ဖုန်းနံပါတ်09-450067677 သို့ ပို့ ရမည့် SMSနမူနာပုံစံ
• Product Code – KRW 001 (International Buffet )
• Qty -4(သွားရောက်မည့်လူဦးရေ)
• DTG- 15.12.17- (သွားမည်နေ့စွဲနှင့်ရက်စွဲ)
🎉 🎉Buffet ၏ ဈေးနူန်း အသေးစိတ် 🎉 🎉
Product Code – KRW 001 (Buffet Dinner with Culture Show (International))
• Normal Price – 35,000Ks
• Groupbuyy Price – 31,500Ks
( Save Your Money – 3,500Ks)
🎉 🎉Menu ၏ ထူးခြားမှူနှင့် ၀န်ဆောင်မှူ 🎉 🎉
-ကလေး(5)နှစ်မှ(12)နှစ်ထိ (50% Off)ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
-International Buffet Dinner ကိုတော့ ည 6း00 မှ 9း00
🙅‍♀️ 🙅‍♀️သတိပြုရန် 🙅‍♀️ 🙅‍♀️
✔️ ✔️ ✔️Groupbuyy မှပို့ ပေးလိုက်သော Discount Coupon Code ကို
သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ် ကောင်တာသို့ပြသပါက
Discount ဈေးခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး Discount Coupon Codeကို
မပြနိုင်ခဲ့ပါက ပုံမှန်ဈေးဖြင့်သာ ရှင်းပေးရပါမည်။
✔️ ✔️ ✔️Government Tax -5 %ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဗိုလ်တစ်ထောင်ကမ်းနားက Vintage Luxury Yacht Hotel က တစ်ယောက်စာ 9000 ကျပ်ထဲနဲ့ အဝစား Buffet
#Groupbuyy #Discount Coupon #Vintage Luxury Hotel #Breakfast Buffet #Buffet Dinner
🛳 🛳ဗိုလ် တစ်ထောင်ကမ်းနား က တစ်ခုတည်းသော အဆင့်မြင့် သဘောင်္ဟော်တည် ဖြစ်တဲ့ Vintage Luxury Hotel မှာ အေးအေး ဆေးဆေးနဲ့ သက်သက်သာသာသွား​ရောက်သုံးဆောင်နုိုင်ဖို့ ။
🍽 🍽 🍽မနက် စာ Buffet ၁ ယောက် ကို မြန်မာငွေ 9000 ကျပ်နဲ့ စုံစုံလင် လင် အ၀စား ချင်သူတွေအတွတ် သတင်းကောင်းလေး တစ်ခု ။
✔ ✔ ✔နံနက်စာ Buffet မဟုတ် ဘဲ ညနေ စာကို ရန်ကုန်မြစ်ရှုခင်းတွေကြည့်ပြီး ALarcart ထဲက ကြိုက်ရာမှာ စားပြီး Dinner စားသုံးချင်သူတွေ အတွတ်လည်း မိမိစားသုံးမှုတွေပေါ်မှာ သက်သာစေမဲ့ 💯 💯 15% off Coupon လေးတွေရှိပြီနော်။
✔ ✔ ✔ကဲဘယ်လို Discount Coupon လေးတွေထုတ်ကြမလဲ ။
🌐www.groupbuy.com.mm မှာ webcoupon ထုတ်ဖို့အခက်ခဲရှိသူတွေအတွတ် မိမိဖုန်းထဲကိုဘဲ အလွယ်တကူ 📱 📱 📱SMSကူပွန်ထုတ်ယူချင်ရင်တော့ groupbuyy Hotline 📞09450067677/ 📞09450087677 ကို ↔ ↔(Vinatge Buffet Coupon) ↔ ↔ဆိုပြီး SMS ပို့ လိုက်ရုံပါဘဲ။မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း SMS coupon ပြန်ပို့ လာပေးပါလိမ့်မယ်။
မနက်စာ ဘူဖေးမဟုတ်ဘဲ ညနေစာ မိမိကြိုက်ရာရွေးချယ်စားသောက်မှုအပေါ်မှာ သက်သာ ချင်ရင်တော့ ↔ ↔ (Dinner 20% off Coupon) ↔ ↔ဆိုပြီး SMS ပို့ လိုက်ရုံပါဘဲ။
↪ ↪ ↪နံနက်စာဘူဖေးမှာ ဘာတွေ ပါလဲ သိချင်နေ သူတွေ အတွတ်
Buffet Breakfast တွင်
• Dessert item (11 မျိုး)
• Soup item (2 မျိုး)
• Main Course (4 မျိုး)
• India Food (1 မျိုး)
• ကြာဇံကြော် ၊ သီးစုံထောပတ်ထမင်းကြော်၊ ကြက်ပင်စိမ်း
• Grill Tomato & Chick Sausage
• Harsh Brown Potato
• Bake Bean
• Chicken Cold Cut (Salad)
• Musili Yogurt
• Cheese Platter အစရှိသော ပာင်းလျာစားဖွယ်စုံများအပြင်
• Coffee \_ Tea & Juice စသည်တို့ကိုအ၀စားသုံးနိုင်ပါသည်။
• နေ့စဉ် Main Course ဟင်းလျာများအပြောင်းအလဲရှိသည်။
• နေ့စဉ် မနက် ၇း၀၀ မှ ၁၁း၀၀ အထိသာ Discount ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
• ၅နှစ်အောက်ကလေးများ အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ၅နှစ်အထက်ကလေးများ
🛳 🛳 🛳##လိပ်စာ ###
No. 6, Botahtaung Jetty, Near Botahtaung Pagoda,
တောင်ဥက္ကလာ ဝေဇယန္တာလမ်း နဲ့ ဂန္ဓမာလမ်းထောင့်က 99 Hot Pot
🌐Groupbuyy.com #Discount Coupon 😆 🎟 🎟 #Yangon #99 HotPot 🍽 🍲 🍵 🍶 #Up to 35% off ☝
🍲Hot Pot နဲ့ Buffet ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် တစ်နေရာတည်းမှာ
နှစ်မျိုးလုံးရရှိနိုင်မည့် 99 Hot Pot ဆိုင်လေးကို 35% discount Coupon လေးနဲ့ အတူ မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နော် ။
🍲ဝေဇယန္တာ လမ်း နဲ့ ဂန္ဓမာလမ်းထောင့်က Gandamar Wholesale Shopping Centre မှာ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး သပ်ရပ်တဲ့ ဆိုင်အပြင်အဆင်နဲ့အတူ တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းတဲ့ နေရာမှာမို့ စားသုံးသူများ အကြိုက်တွေ့စေမှာ အမှန်ပါပဲ ။
🍲Hot Pot အပြင် Buffet လည်းအ၀စား ရှိတာမို့ Hot Pot နဲ့ Buffet ကြိုက်သော Customer များအတွက် လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဆိုင်လေးပါဘဲ
🍲ဒီတော့ အထူးလျော့ဈေးနဲ့ သွားရောက်နိုင်အောင် Groupbuyy မှ Discount Coupon ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
#Groupbuyy.com 🌐 ph: 09450067677 📞 ☎သို့ဆက်သွယ် ပြီးSMS Coupon 📲 📱ထုတ်ယူပြီး သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ်ဖုန်းဆက်ပြီးကူပွန်ထုတ်ရန်
အဆင်မပြေသူများအတွက်လည်းwww.groupbuyy.com.mm 🌐 Website သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် ပြီးသော်လည်းကောင်း Discount coupon ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
##Discount Code ရရန် website ကောဖုန်းဆက်ရန်ပါ
အဆင်မပြေသူများအတွတ် Groupbuyy.com 🌐 ဖုန်းနံပါတ်09-450067677 📞သို့ ပို့ ရမည့် SMSနမူနာပုံစံ
🍽(1)Product Code – NNH 001 (မိမိ ထုတ်ယူလိုသော လျော့ဈေးဝန်ဆောင်မှူ)
🍽• QTY – 1 (သွားရောက်မည့်လူဦးရေ)
🍽• DTG – 17.2.2017 (သွားရောက်မည့်နေ့)
#‪#လတ်တလောရရှိနိုင်သော‬‬‬‬‬ Hotpot Buffet အမျိုးအစား##
🍽• (1)Product Code – NNH 001 (Happy Hour for Total Bill 35% off only Groupbuyy)
🍽• (2)Product Code – NNH 002 (Hot Pot Buffet for 1 person 30% off)
## 99 Hotpot Buffet ၏ ဈေးနှုန်းအချက်အလက် ####
🍽(1)Product Code – NNH 001 (Happy Hours for Total Bill 35% off only Groupbuyy)
• Normal Price – 11,800++ Ks
• Groupbuyy Price – 7,670++ Ks
• (Save Your Money) – 4130 Ks
Happy Hours အစီစဉ်အနေနှင့် Groupbuyy Customer များအတွက်သာ 10:00 AM to 2:00 PM အထိ Total Bill အပေါ် 35% off ၀န်ဆောင်မှူပေးမှာဖြစ်ပါသည် ။
🍲 🍲 🍲 🍲 🍲 🍲 🍲 🍲 🍲 🍲 🍲 🍲 🍲 🍲 🍲
🍽(2)Product Code – NNH 002 (Hot Pot Buffet for 1 person 30% off)
• Groupbuyy Price – 8,260++ Ks
• (Save Your Money) – 3,540 Ks
Groupbuyy Customer များအတွက်သာ 2:00 PM to 11:00 PM အထိ Hot Pot Buffet စားသုံးသူတစ်ဦးကိုTotal Bill အပေါ် 30% off ၀န်ဆောင်မှူပေးမှာဖြစ်ပါသည် ။
🎉##99 Hotpot Buffet ၏ ထူးခြားချက်များ 🎉 ####
ဟင်းရည်အရသာမှာ မာလာ(ထုံစပ်) ၊တုန်ယမ်(ချဉ်စပ်) ၊အချို (၃) မျိုး ရနိုင်တာမို့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဟင်းရည်ကို မှာယူနိုင်ပါတယ် ။
Buffet မှာ စတော်ဘယ်ရီ ၊ချောကလက် ၊ဒူးရင်း ၊သခွားမွှေးသီးစုံ ၊ဘလူးဘယ်ရီ ၊Rainbow ရေခဲမုန့် အရသာ ၆ မျိုး ပါဝင်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သုံးဆောင်နိုင်ပါသည် ။
သစ်သီးအချိုပွဲ ၄ မျိုး ၊Juice နှင့် ကိုကာကိုလာအအေး အပြင် ထမင်းကြော် ၊ကြာဇံကြော် ၊အရွက်ကြော် ၊အသုပ် လည်း ပါဝင်ပါသည် ။
##99 Hotpot Buffet ၏ သတိပြုရမည့်အချက်များ ##
1ဦးလျှင် tax 5% နှင့် Services 5% ပေးဆောင်ရပါမည်။
စားသုံးသူသည် ကလေးဖြစ်ပါက အရပ် ၃ ပေကို free ပေးပါမည် ။
အရပ် ၃ ပေနှင့် ၄ ပေကြား ဖြစ်ပါက 6000 Ks ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အရပ် ၄ ပေအထက် ဖြစ်ပါက လူကြီးတစ်ယောက်စာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည် ။
သုံးဆောင်သည့်အချိန် မကန့်သတ်ထားပါ ။
အိုးထဲတွင် 200 ဂရမ်နှင့်အထက် ကျန်ရှိပါက သို့မဟုတ် စားပွဲပေါ်တွင် အလွန်အကျူးကျန်ရှိပါက 5,000 Ks မှ 12,800 Ks ထိ ထပ်မံကောက်ခံပါမည် ။
(မှတ်ချက် - Groupbuyy မှပို့ ပေးလိုက်သော Discount Coupon Code ကို သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ် ကောင်တာသို့ပြသပါကDiscount ဈေးခံစားခွင့်ရှိ
မည်ဖြစ်ပြီး Discount Coupon Codeကို မပြနိုင်ခဲ့ပါက ပုံမှန်ဈေးဖြင့်သာ ရှင်းပေးရပါမည်။)
##Groupbuyy 🌐 ဆိုသည်မှာ……
Customer များအနေနဲ့ ကူပွန်အသုံးပြုရာတွင်အဆင်မပြေမှု များဖြစ်ပေါ် ပါက Customer Care Hotline ☎09-450067677သို့တိုက်ရိုက်ခေါ်
# 🚌##လိပ်စာ ## 🚌
ဝေဇယန္တာ လမ်း နဲ့ ဂန္ဓမာလမ်းထောင့်က Gandamar Wholesale Shopping
Corner of Waizayantar Street & Gandamar Street, Gandamar WHolesale Shopping Center
မြောက်ဥက္ကလာက MCUBE Hot Pot
#Groupbuyy� �#Discount� Coupon �#Mcube� Buffet Hotpot & Grill #Upto 15% #Buffet Hotpot & Grill
အကင်ကောင်းကောင်းနှင့် အရသာရှိသော ဟော့ပေါ့ကိုမှဘူဖေး အနေ နှင့် စားသောက်ချင် သူများအတွက်#Mcube Buffet Hot Pot & Grillသို့ ကြွလှမ်း ခဲ့ပြီး #Discount ရရှိရန်#Groupbuyy သို့ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ……….
#Groupbuyy ph: 09450067677 သို့ဆက်သွယ် ပြီးSMS Coupon ထုတ်ယူပြီး သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ်ဖုန်းဆက်ပြီးကူပွန်ထုတ်ရန်အဆင်
မပြေသူများအတွက်လည်း www.groupbuyy.com.mm Website သို့
တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် ပြီးသော်လည်းကောင်း Discount coupon
##Discount Code ရယူရန် Groupbuyy ဖုန်းနံပါတ် -09-450067677
• Product Code - MCBH004 (မိမိ အလိုရှိသော လျော့ဈေးကူပွန်)
• DTG – 9.9.2016 (သွားရောက်မည့်နေ့ရက်)
• (1)Product Code – MCHB 004 (Happy Hours for 15 % off)
•(2)Product Code – MCHB 001 ( Buffet HotPot & Grill )
• (3)Product Code – MCHB 002 ( HotPot Buffet & ဘီယာ )
• (4)Product Code – MCHB 003 ( A La Cart )
(1)Product Code – MCHB 004 (Happy Hours for 15 % off)
• Normal Price – 8800 Ks ++
• Groupbuyy Price – 7500 Ks ++
• (Save Your Money) – 1300 Ks
-အကင် နှင့် ဟော့ပေါ့ ဘူဖေးအ၀ စား
-Happy Hours ကို ညနေ ၄နာရီ မှ ၆နာရီ အထိ ကန့်သတ်ထားပါသည်။
-၄ နာရီမှ ဘူဖေး စခင်းပါမည်။
(2)Product Code – MCHB 001 (Buffet Grill & HotPot 10 % off)
• Groupbuyy Price – 7900 Ks ++
• (Save Your Money) – 900 Ks
-ဘူဖေး အချိန် ညနေ ၆နာရီမှ ၁၀ နာရီ အထိဖြစ်သည် ။
-ဘူဖေး ဟောပေါ့ နှင့် အကင် အမျိုးစုံလင်စွာသုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။
(3) Product Code – MCHB 002 (Buffet & ဘီယာ Package10 % off)
• Normal Price – 11800 Ks ++
• Groupbuyy Price – 10200 Ks ++
• (Save Your Money) – 1200 Ks
-Buffet အ၀စားအပြင် ဘီယာ အမျိုးအစား နှစ်မျိုးပါရှိပြီး မြန်မာ နှင့် ရီဂယ် ဆဲဗန်း ထဲမှကြိုက်နှစ်သက်ရာ (၂) ပုလင်း သောက်သုံး ရွေးချယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
(4)Product Code – MCHB 003 (A La Cart 10 % off)
• Normal Price – 10000 Ks ++
• Groupbuyy Price – 9000 Ks ++
• (Save Your Money) – 1000 Ks
-အာလာကတ် ဟင်းလျာများတွင် Thai Food အမျိုးအစားများ ရရှိ ပြီး ဈေးနှူန်း အစားစား ရှိပြီးအထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဈေးနှူန်း မှာ ဥပမာအနေနှင့်
-မိမိစားသုံးသောကုန်ကျစရိတ် total bill ပေါ်တွင် ၁၀ %
�#�About� Mcube Buffet Hotpot & Grill
မြောက်ဥက္ကလာ သုဓမ္မာလမ်းမ ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး သန္တာကား
မှတ်တိုင် အနီးတွင်တည်ရှိပြီးနွေးထွေးပျူဌာသော ၀န်ထမ်းများ၏ကြိုဆိုမှူ
သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော အသားများ နှင့် အသီး အရွက်များစနစ်တကျ
စီမံထားပေးသောနေရာထိုင်ခင်းလေးများနှင့် ဘူဖေး ဟော့ပေါ့
ဆိုသည့်အတိုင်း အမျိုးပေါင်း(၆၀) အမျိုးအမည်စုံလင်သည့် အပြင်
အချိုပွဲအဖြစ် Soft drink အသီးပွဲများ ပါစီစဉ်ပေးထားပြီး
သက်သာသောဈေးနှူန်း လေးများနှင့် လာရောက်
သုံးဆောင်နိုင်ဖို့ Groupbuyyသို့ဆက်သွယ် လိုက်ဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
-အရပ် ၃ပေအောက် ကလေးငယ်များ Foc ဖြစ်ပြီး ၃ပေ မှ ၄ပေ
အထိရှိသော ကလေး များ လူကြီး ၁၀က်စာ ရှင်းပေးရပါသည်။
-ဆိုင်ဖွင့်ချိန် - နေ့လည် ၁၂ မှ ည ၁၀း၀၀ နာရီအထိ
-ဘူဖေးကို ညနေ ၄နာရီမှ ခင်းပါသည်။
- ++ ဆိုသည်မှာ Goverment Tax 5% ကိုဆိုလိုပါသည်။
• (မှတ်ချက် - #Groupbuyy မှပို့ ပေးလိုက်သော Discount Coupon Code
ကို သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ် ကောင်တာသို့ပြသပါက Discount ဈေးခံစားခွင့်
ရှိမည်ဖြစ်ပြီး Discount Coupon Codeကို မပြနိုင်ခဲ့ပါက ပုံမှန်ဈေးဖြင့်သာ
• #Groupbuyy #Discount Coupon သည် �#�Booking� Confirmation
• ၀ယ်ယူစားသုံးသူများ သက်သာအောင် Discount Coupon များ
ထုတ်ပေးသော Company ဖြစ်သည်။
www.groupbuyy.com.mm ဆိုတာ မြန်မာပြည် ရှိ အမြို့မြို့အနယ်နယ်တိုင်းမှာရှိသော လျှော့ဈေးသတင်းများကို အလွယ်ကူအရိုးရှင်းဆုံးနည်းဖြင့်
အချိန်နှင့် တပြေးညီ သတင်းပေးလျှက်ရှိနေပါပြီ…။
မြောက်ဥက္ကလာပ ၊ သုဓမ္မာ လမ်းမပေါ် ၊ သန္တာ ကားမှတ်တိုင် အနီး
လသာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ T&T Hot Pot
Groupbuyy##Discount Coupon##Hot Pot##T&T Hot Pot##Total Bill 10% Off
✔️ ✔️ ✔️Groupbuyy Customer တို့ရေ တစ်ပါတ်မှာတော့ ရှူးရှူးရှဲရှဲပူပူစပ်စပ်လေးကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက် ၂၂ လမ်း လသာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ➡️T & T Hot Pot ⬅️ ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်နော်။
✔️ ✔️ ✔️10% off Discount coupon အခမဲ့ ထုတ်လို့ရအောင် နည်းလေးလည်းအောက်မှာထည့် ပေးထားတယ်နော်။
✔️ ✔️ ✔️ဒီဆိုင်လေးကတော့ Hot Pot ကိုအမှန်တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် မဖြစ်မနေသွားသင့်တဲ့ဆိုင်လေးလို့ပြောချင်ပါတယ်။ 😉 😉ဆိုင်အပြင်အဆင်ကလည်း တစ်ခြားဆိုင်တွေနဲ့လုံးဝမတူပဲ တော်တော်ကိုထူးခြားတယ်။ ✌️ ✌️T & T Hot Pot ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ အသားလုံး အသားလွှာ အသားဖက်ထုပ်တွေကို 🐠 🐠 Freshment 🐠 🐠စစ်စစ်များဖြင့် စားဖိုမှူးကြီးများကိုယ်တိုင် Handmade ပြုလုပ်ထားတာဆိုတော့ လုံးဝအရသာရှိပြီး လျှာပေါ်မှာစွဲသွားစေမှာအမှန်ပဲ။ 👍 👍ပင်လယ်စာတွေလည်းအစုံရတယ်နော်။ 😍 😍ဂဏန်း၊ 🦀 🦀ပုဇွန်ကြား၊ 🦐 🦐ဂုံး၊ပင်လယ်ရေဘ၀ဲ တို့ကိုလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်စားသုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အစားတစ်လိုင်းတွေအတွက်ကတော့ အဇမ်းကိုမိုက်သွားပြီနော်။ 😎 😎ALarcart ဆိုတော့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုလူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်စားသုံးလို့ရတယ်နော် 👋 👋။
✔️ ✔️ ✔️T & T Hot Pot ရဲ့ Set Menu တွေကတော့
1.Pork Pot (၀က်သားအိုး)-8000Ks
2.Chicken Pot (ကြက်သားအိုး)-8000Ks
3.Fish Fillet Pot (ငါးအသားလွှာအိုး)-9000Ks
4.Seafood Pot (ပင်လယ်စာအစုံအိုး)-13000Ks
5.Premium Snowflake Beef Pot (အဆင့်မြင့်နှင်းပန်းအမဲလွှာအိုး)-11000Ks
6.Premium Beef Pot (အဆင့်မြင့်အမဲလွှာ(A Class)အိုး)-9000Ks
7.Beef Pot (အမဲသားအိုး)-8000Ks
8.Seafood+Pork+Chicken Pot (ပင်လယ်စာ+၀က်သား+ကြက်သားအိုး)-15000Ks
9.Vegetable Pot (အသီးအရွက်အိုး)-8000Ks တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းတွေကလည်း သက်သာတဲ့အပြင် အခုဆိုရင် 👉Special Discount 👈 တွေပါရှိနေတော့အရမ်းကိုပျော်စရာကောင်းသွားပြီ။ 😇 😇Discount Coupon တွေအခမဲ့ထုတ်ယူရန်အခုပဲ 🌐Groupbuyy 🌐သို့ဆက်သွယ်လိုက်ကြရအောင်။ 📱 📱
✔️ ✔️ ✔️မိသားစု မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများနဲ့ပျော်ရွှင်စရာအချိန်တွေကို Hot Pot စားရင်းကုန်ဆုံးလိုက်ကြရအောင်။Discount Coupon ရယူရန် Groupbuyy Ph No 📞 📞09450067677/09450087677 သို့ (T & T Hot Pot Total Bill 10% Off)ဆိုပြီး Sms ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 💬 💬 💬မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း မိမိ Mobile Ph ထဲသို့ Sms Coupon ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ 👀 👀
🚫 🚫 🚫(မှတ်ချက်-Groupbuyy မှပေးပို့လိုက်သော Discount Coupon Code ကိုသက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်ကောင်တာသို့ပြသပါက Discount ဈေးခံစားခွင့်ရှိပြီး Discount Coupon Code မပြနိုင်ခဲ့ပါကပုံမှန်ဈေးဖြင့်သာရှင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။) 🚫 🚫 🚫
Groupbuyy Discount Coupon သည် Booking Comfirmanation Code မဟုတ်ပါ။၀ယ်ယူစားသုံးသူများသက်သာအောင် Discount Coupon ထုတ်ပေးသော Company ဖြစ်သည်။
No.82,22nd Street(Lower Block,Lathar Township) Yangon
စမ်းချောင်းမြို့နယ် မြေနီကုန်းက K&K Hot Pot
#K&K hotpot #Groupbuyy #Get 2000ks off Oway Ride Coupon
#Groupbuyy Discount Coupon# 10% 0ff coupon #K&K Hot Pot & Spicy Taste
✔️ ✔️ ✔️ကဲ ခုဆိုရင်ဆောင်းရာသီလေးကလဲရောက်နေပြီဆိုတော့ ဆောင်းရာသီအေးအေးလေးမှာ 🥣 🍲 ဟော့ပေါ့ပူပူစပ်စပ်လေးသာစားလိုက်ရမယ်ဆို လုံးဝကို ဖလန်းဖလန်းပေါ့နော..
****ငွေကျပ် 7000 ရှိရုံနဲ့ ဘော်ဒါ ၃ယောက်စာဟော့ပေါ့ကို တစ်ဝဆွဲလို့ရမည့်အခွင့်အရေးကိုလုံးဝလက်လွတ်မခံဘဲ OWAY Ride ရဲ့ 2000 ကျပ်သက်သာမည့် Taxi Service လေးနဲ့ မြေနီကုန်း က K&K Hot Pot ဆိုင်ကိုအမြန်ဆုံးသာသွားလိုက်ကြရအောင်...***.
🎉 🎉 OWAY RIDE App ရဲ့ 2,000 ကျပ်သက်သာမည့် အခွင့်အရေးရရှိနိုင်ရန် OWAY RIDE Appထဲတွင် Promo Code ကို ရိုက်ထည့်ပေးရပါမည်။ှ Promo Code ရရှိနိုင်ရန် Grouypbuyy Hot Line 09 450067677 သို့ SMS ပို့၍ ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်မိမိသွားလိုတဲ့ နေရာကို ၂၀၀၀ ကျပ် taxi ခ သက်သာပြီနော် Groupbuyy Customer တို့ ရေ။ 🎉 🎉
✔️ ✔️ ✔️25% off Discount coupon အခမဲ့ ထုတ်လို့ရအောင် နည်းလေးလည်းအောက်မှာထည့် ပေးထားတယ်နော်
✔️ ✔️ ✔️ဟော့ပေါ့ဆို အခုခေတ်ကလည်း ဟော့ပေါ့ဆိုင်တွေက လက်ညိုးထိုးမလွဲအောင် ပေါသောနေပေမဲ့အရသာရှိပြီး ဈေးနှုန်းတန်တဲ့ဆိုင်ကရှားတယ်လေ 🌐 🌐 ဒီတော့ Groupbuyy Coupon Coustomer တွေအတွက် Admin ကနေပြီးတော့ 👉အရသာကလဲရှိနေရမယ၊် 👉 ဈေးနှူန်းကလည်း လူတိုင်းစားသုံးနိုင်ပြီး လုံးဝတန်နေရမယ် ၊ 👉သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုလည်းရှိရမယ့် အပြင် 👉ဝန်ဆောင်မှုကလည်းပြောစရာမလိုအောင် Good နေရမယ်ဆိုတဲ့ အမိုက်စားဟော့ပေါ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုရှာထားပေးတယ်နော်။
✔️ ✔️ ✔️သူကတော့ 👉 မြေနီကုန်း ဓမ္မစေတီလမ်းမပေါ်က 🎉 🎉K&K 🎉 🎉 ဟော့ပေါ့ဆိုင်လေးပါ။ ဒီဆိုင်လေးက အခုတလော စမ်းချောင်းမြေနီကုန်းမှာ အရမ်းကို နာမည်ကြီးပြီးလူကြိုက်များနေတဲ့ အထဲမှာပါတယ်နော် ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီဆိုင်လေးမှာ 👉 ဟော့ပေါ့ ၃ယောက်စာ အိုးကြီးတစ်အိုးကို 😱 😱 ၇၀၀၀ ကျပ်ထဲနဲ့ အမုန်းဆွဲလို့ရပြီလေ ဒီ ၇၀၀၀ ကျပ်တန် set ထဲမှာ ➡️ ကြက်သား ၊ဝက်သား ၊ ပုဇွန် ၊ပြည်ကြီးငါး ၊ကြက်ဥချောင်း ၊ အသားလုံးစုံ ၊အသီးရွက်စုံ တွေပါတဲ့အပြင် 🥣 🥣ဟင်းရည်အချို ၊အစပ် ၂မျိုးလုံး Free ပေးသေးတာဆိုတော့ ဂျင်းမဟုတ်တဲ့ အမှန်အကန် တွေထဲကတစ်ခုပါ။ 👉ဒါ့အပြင် K&K မှာကမိမိတို့စိတ်ကြိုက်ထပ်လိုချင်တဲ့ အသား၊ အသီးအရွက်မျိုးစုံကို ပွဲလိုက်မဟုတ်ဘဲ ⏩ဂရမ် နဲ့ရောင်းပေးတာပါ ဝက်သား ၃ထပ်သား 100g မှ 1500 ကျပ်ဘဲကျပါတယ် ပွဲလိုက်ဆိုရင် အပြင်မှာ တစ်ပွဲကို ၂၀၀၀ ကနေ ၄၀၀၀ကျပ်ထိရှိတာဆိုတော့ ခုလိုဂရမ်နဲ့ရောင်းပေးထားတဲ့အတွက် အများနဲ့မတူဘဲ အရမ်းကိုတန်လွန်းပါတယ်နော်။ ⏩အသီးအရွက်ဆိုလဲ 120g မှ 600ကျပ်သာကျသင့်ပြီး အသီးအရွက် ၂မျိုး ၃မျိုးလောက်ထိရနိုင်တယ်နော်။ 🎉 🎉K&K ဟော့ပေါ့မှာ ဟော့ပေါ့ကြီးဘဲသီးသန့်မဟုတ်ဘဲ ⏩ မာလာရှမ်းကော ၊ပင်လယ်စာနဲ့ အခြားအစားအစာမျိုးစုံကိုလဲ အနိမ့်ဆုံး ၃၀၀၀ကျပ်ကနေ ၁၅၀၀၀ကျပ်အထိသာရှိတဲ့ အသက်သာဆုံးဈေးနှုန်းတွေနဲ့ စားလို့ရသေးတယ်နော်။နောက်ပြီး ဆိုင်နေရာကလည်း နှစ်ထပ်ရှိတာဆိုတော့ ကျယ်ဝန်းပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တယ်။ဝန်ဆောင်မှုကလည်း စားသုံးသူတွေအတွက်လုံးဝကိုစိတ်ကျေနပ်စေမှာပါနော်။
✔️ ✔️ ✔️ဒီလိုမျိုးအရမ်းတန်ပြီး ဈေးနှုန်းသင့်တဲ့အပြင်ကိုမှ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော် 🌐Groupbuyy ကနေ Discount Coupon လေးထုတ်ပြီးသာသွားစားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ 💰 💰 Total Bill 10% ရမှာပါ။ 😱 😱WoW……..အရမ်းကိုမိုက်သွားပြီနော်။ကဲ ဒီလိုဈေးနှုန်းသက်သာပြီး အရသာရှိလှတဲ့အစားအစာတွေကို 10% Discount နဲ့သွားရောက်စားသောက်နိုင်ဖို့အတွက် 📱 📱Groupbuyy Phone 09 450067677 09450087677 သို့ ⏩ ( K&KHot Pot 10% Off ) ဟု SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမိမိ Mobile Phone ထဲသို့ SMS Coupon ပြန်လည်ပေးပို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
⏩ ⏩Govement & Service Tax -5%
⏩ ⏩ဆိုင်ဖွင့်ချိန်- 11:00AM to 10:00PM
🎉 🎉OWAY RIDE Taxi Service ရဲ့ 2000ကျပ်သက်သာမည့် အခွင့်အေ၇းရရှိနိုင်ရန် Groupbuyy Hot Line 09 450067677 သို့ SMS ပေးပို့ယူရယူနိုင်ပါတယ်။Sim Card တစ်ခုကို ၂ကြိမ်သာသုံးခွင့်ရှိပါသည်။ 🎉
⏩ ⏩လိပ်စာက -
အမှတ် ၇၇ မြေညီထပ် ဓမ္မစေတီလမ်းမပေါ် တော်လှန်ရေးပန်းခြံ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဦးဝိစာရမီးပွိုင့်အကျော် Sweet hotel အနီး မြေနီကုန်း ၊စမ်းချောင်း ။
ဗဟန်းမြို့နယ်က 5000 တန် နှစ်ယောက်စာ Hot Pot Set Menu တွေရနိုင်တဲ့ The Cook Hot Pot
#Groupbuyy Discount Coupon #10% Coupon off The Cook Hot Pot#OWAY Ride Taxi Service
✔️ ✔️ ✔️ဆောင်းရာသီအေးအေးလေးနဲ့အလိုက်အဖက်ဆုံးအစားအစာကိုပြောပါဆိုရင် ဟော့ပေါ့ပူပူစပ်စပ်လေးကိုဘဲ ညွှန်းပေးရပါလိမ့်မယ်…..
ဟော့ပေါ့ကို အရသာရှိရှိနဲ့ဈေးနှုန်းတန်တာလေးစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 👉 ဗဟန်းမြို့နယ်ဗိုလ်စိန်မာန်လမ်းထဲက The Cook Hot Pot ကိုသာသွားလိုက်ပါနော်
📣 📣The Cook Hot Pot ဆိုင်လေးကို 🚗 🚗OWAY Ride Taxi Service နဲံ့သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ မိမိကျသင့်မည့် Taxi ခရဲ့ ၂၀၀၀ကျပ်သက်သာမည့်အခွင့်အရေးကိုလည်းရရှိအုံးမှာပါ။ 📣 📣
🙅‍♀️ 🙅‍♀️ 🙅‍♀️သတိပြုရန် 🙅‍♀️ 🙅‍♀️ 🙅‍♀️
⏩၂၀၀၀ကျပ်သက်သာမည့် OWAY Ride ရဲ့အခွင့်အရေးကိုရရှိနိုင်ရန် Groupbuyy Hotline 09450067677 ,09450087677 သို့တိုက်ရိုက်ဖုန်းဆက်၍ OWAY Promo Code ကို၇ယူနိုင်ပါသည်။
⏩Groupbuyy မှပေးပို့လိုက်သော OWAY Promo Code ကိုမိမိ Mobile Phone ထဲရှိ OWAY App ထဲတွင်ရိုက်ထည့်မှသာလျှင် ၂၀၀၀ကျပ်သက်သာမည့်အခွင့်အရေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။(မိမိ Mobile Phone ထဲတွင် OWAY APP ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်)
⏩Sim Card တစ်ခုကို OWAY Promo Code တစ်ကြိမ်သာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
✔️ ✔️ ✔️ဒီဆိုင်လေးမှာ ငွေကျပ် 💰 💰5000ထဲနဲ့မိမိရဲ့ ချစ်သူလေးနဲ့ဘဲဖြစ်စေ မိမိရဲ့ဘော်ဒါနဲ့ဘဲဖြစ်စေ နှစ်ယောက်စာ Set Menu တွေကို အပီဆွဲနိုင်ပြီနော်။လုံးဝလုံးဝကိုတန်လွန်းတာ ဒီ၅၀၀၀ တန်နှစ်ယောက်ယောက်စာ set menu မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့….
- 🍲 ဟော့ပေါ့ဟင်းရည် (ဟင်းရည်က အချိုနဲ့အစပ်နှစ်မျိုးလုံးကို Free နော်)
🍲 ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစုံ ၁ပွဲ
🍲 ကြိုက်နှစ်သက်ရာအသားလွှာ ၁ပွဲ (ကြက်သား, ဝက်သား, အမဲသား, ငါးလွှာ, ပုဇွန်)
🍲 ကြိုက်နှစ်သက်ရာ homemade အသားလုံး ၁ပွဲ (ကြက်သား, ဝက်သား, အမဲသား)
🍲 အခြား readymade အသားလုံးအစုံ ၁ပွဲ (other assorted meatballs) Wow…အရမ်းမိုက်တယ်
Set Menu နဲ့မစားချင်တဲ့ သူတွေအတွက်လဲ
- readymade အသားလုံး
- homemade အသားလုံး ချိစ်ဘော
- အသားလွှာ ၁ပွဲ - ၁၀၀၀ ကျပ်
- ကြက်တောင်ပံအစပ်ကြော် -
- ချိစ်အသားလုံးကြော် စသဖြင့် အနဲဆုံး၂၀၀ ကျပ်ကနေ ၂၅၀၀ထိဘဲရှိတာဆိုတော့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်စားသုံးနိုင်သေးတယ်လေ။
✔️ ✔️ ✔️ဒီဆိုင်လေးမှာ ဟော့ပေါ့အပြင် တခြားယိုးဒယားအစားအစာမျိုးစုံလဲရသေးတယ်နော် ထိုင်းစတိုင် ကြက်တောင်ပံကြော် ၊ ထိုင်းစတိုင် အမဲလုံးပဲကြာဆံသုပ် ၊ ဂဏာန်းချောင်း ချိစ် Salad စသဖြင့် အရသာရှိလှတဲ့ ထိုင်းအစားအစာမျိုးစုံကိုလည်း စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ကဲ Groupbuyy Coupon ဘော်ဒါတို့ရေ ဒီလိုမျိုး အသက်သာဆုံးဈေးနှုန်းတွေနဲ့ အရသာရှိရှိစားသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တောု့Groupbuyy ကနေ 10% Discount Couponလေးကိုထုတ်ယူပြီး အမြန်ဆုံးသာသွားစားလိုက်တော့နော်….
✔️ ✔️ ✔️10% Discount Coupon လေးကိုရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့-Groupbuyy Hot Line -09450067577 ,09 450087677 သို့ ( The Cook Hot Pot 10% off ) ဟု SMSပေးပို့လိုက်ပါ။မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း မိမိ Mobile Phone ထဲသို့ SMS Coupon Code ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်ဖွင့်ချိန်-12:00PM to 9:00PM
🚗 🚗 🚗လိပ်စာကတော့-
No.11, Bo Sein Hman St., Bo Sein Hman Quarter, Bahan Tsp.,